ဦးဝီရသူ တရားပွဲ ပေါက်ကွဲမှု ၅ ဦး ဆေးရုံတင်ရ
ဆရာတော် ဦးဝီရသူ မိန့်ကြားချက်
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၈၄×၈၅ လမ်းကြား ၃၆ လမ်းပေါ်မှာ မနေ့ညဦးပိုင်းကကျင်းပတဲ့ တရားပွဲမှာ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဟောကြားနေစဉ် ည ၉းဝဝ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ တပည့် ဦးအောင်ကိုဝင်းက ကိုရင်တစ်ပါးနဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရပုံကို အသေးစိပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တရားမဏ္ဍပ် နောက်ကျောဖက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဲဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ အောင်မြေသာဇံမြီု့နယ်က ဒေါ်အေးခင်၊ အခြားအမည်မသိ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး၊ ကိုရင်ပညာသာမိ၊ ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ မပန်းနုအောင် စသူတို့ ၅ ဦး အခုဆေးရုံတက်ရောက်ပြီး ကုသမှုခံယူနေကြောင်း၊ အဲဒီပေါက်ကွဲမှုမှာ ကားတစီးပျက်စီးခဲ့ပြီး အဲဒီကားကို မနေ့ကညသန်းခေါင်ကျော်မှာ သက်ဆိုင်ရာတွေက ယူဆောင်သွားကြောင်းနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆရာတော်ရဲ့ အသက်အန္တာရယ်ကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း ဆရာတော် ဝီရသူက RFA ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
Please " Sar say sayar ta Oo yae hmat tann" for today post to facebook as soundcloud, it's very nice to listen and I wish the Burmese people to know about it.
As Anonymous said, if this terror was done by muslim mobs, it may not be done in that place..in Burma it is very easy for anyone who want to destroy any building, churches, monastery, offices, pagodas or anything..since there is no guard presented in any of those places....So, this explosion might have been come from the government or Burmese extremists or the monk himself...I am serious about this.....By the way, I amaChristian!!!
Jul 24, 2013 09:12 PM
The bomb that exploded when you were giving speech wasn't with Muslim's Terror. Actually, it must be the Military who is supporting you all. If it was Muslim Terror Bomb, the whole of your Temple ( Ma So Yaing ) will disappear. Coming soon!
you are Preaching NAZi speeches.You are Pro-NAZI
I think this is the reaction of your action U Wirathu.That isaNewton's law.